Uke okusemathinini ikhukhamba isaladi? Uma kungenjalo, ngaphuthelwa lukhulu - udinga ukwenza isiqiniseko. Futhi ulungiselela indlela, sizokutshela kuleso sihloko.
Canned ikhukhamba isaladi
Lokhu isaladi iphekwe kakhulu ukumane futhi iqukethe ayimbijana izithako. Kodwa ngesikhathi esifanayo ukulungele ukulondolozwa ke kunobuciko mnandi kakhulu futhi iphunga ...! Iphunga - kungcono nje inganekwane!
Ngakho, ukuze isaladi ikhukhamba leresiphi, udinga ukuthatha, eqinisweni, ukwenza ukhukhamba, ukukhiqiza ukucubungula yabo eyinhloko, okuhlanganisa ukuhlanza kubo nokususa amathiphu. Ngemva ukhukhamba preprocessing akudingeki usike izacile, kodwa hhayi ewugqinsi (mayelana 2 mm) tincetu. Phela, ukulungiswa lokhu isaladi akubalwa ukuthatha ukhukhamba ekahle kakhulu - ukulingana ngisho ebanjwe udobo.
Uma une ukhukhamba lelungiselelwe, udinga ukuthatha up umnsalo. Kuleso simo, uma uthatha endaweni ethile 2-2.5 kg. ukhukhamba, uzodinga mayelana ikhilogremu anyanisi. Zama ukukhetha ikhanda naphakathi - enjongweni engcono. Anyanisi kudingeka ikhasi bese uthathe izindandatho. Ngemuva ukusika, zama ukuveza oshayelayo disk phezu ring.
Manje kudingeka sihlanganise lezi izithako ezimbili bese wengeza isinongo. Lokho omunye wabo? Ungathatha ushukela, uviniga, amafutha yemifino, coriander, amakhambi nosawoti - lena ofanele kakhulu uhlu nalutho ezinjalo. Zonke izithako nje efakwe ohlwini udinga ukuthatha 100 amagremu. Yiqiniso, asisebenzi usawoti - kuzothatha cishe 1 isipuni, kanye imifino kanye coriander - lezi izithako, zama ukwengeza ukunambitha.
Njengoba seniye ehlanganiswe-anyanisi ukhukhamba, ikhukhamba isaladi udinga ukubeka phezu kwesitofu bese ukuphela imizuzu 10 - kufanele ulinde isikhashana lapho ukhukhamba izoshintsha umbala. Ngemva kwalokho, babeka isaladi ku a izimbiza pre-okulungiselelwe kanye Roll up ngaphansi cap.
Ikhukhamba isaladi in Korean
Thanda ostrenkoe? Bese uzame ukwenza isaladi yamakhukhamba ku-Korean. Ukupheka ke udinga ngaphandle ukhukhamba nemifino.
Ngakho, ukulungiswa ukhukhamba e-Korean kuyadingeka ukuthatha ikhukhamba fresh - mayelana 2 amakhilogramu, geza, Ukunquma emaphethelweni bese uthathe tincetu mncane eside mayelana 4-5 cm manje usawoti kuwo ukunambitha futhi ushiye sokunika .. Kuzothatha cishe amahora amathathu, umsebenzi wakho - ukulinda aze ukunika ingane yakho ijusi. Manje kufanele ucindezele ngokusebenzisa cheesecloth ukhukhamba kuya juice agelezé.
Manje yisikhathi sokuba kuthathe ukupheka imifino. Uhlobo ngalunye yemifino kuzodinga amayunithi mayelana 3-4. Ukuze isaladi uzodinga anyanisi, utamatisi kanye bell pepper - zonke lezi izithako sibe yimichilo.
Manje kudingeka Fry imifino. Ukuze wenze lokhu, beka pan on isitofu nokushisa kwalo. Ngemva wengeze amafutha yemifino bese Fry anyanisi kuwo. Lapho kuba esobala futhi ethambile, engeza pepper notamatisi, bese uqhubeke inqubo yokuwugazinga ngisho imizuzu engu-15.
Ngemva yokuwugazinga imifino badinga ugarliki - ngaphambili kufanele ochotshoziwe, pepper kanye sikadali isikhashana.
Lapho ucabanga ukuthi imifino zilungele, ususe isisindo ekushiseni wasiqashisa kuphole kancane. Khona-ke selehlile igwebu, azihlanganise eziningi ukhukhamba futhi esikhundleni izimbiza inzalo.
Futhi manje amagama ambalwa mayelana nendlela uvale kahle isaladi ezitsheni. Njengoba masinyane njengoba you walala isaladi izimbiza (kangcono makudle amabhange 0.5-litre), uwafake embizeni bese abilayo imizuzu engu-30 ngemva okwamanje lapho amanzi amathumba. Uma ukuyikhipha amathini, Roll up metal zabo zamabhodlela futhi flip. Uma workpiece selupholile, ungakwazi bawuthwale endaweni epholile ukugcina kwaze kwaba yilapho kufika ubusika.
By endleleni, omunye kanti eyesibili isaladi ukukhonzwa ngaphandle ukuvala amabhange - nje wasibeka efrijini - ukusuka lapho ungathola ukudla nganoma isiphi isikhathi esilungele wena.